फुट नजिक नेकपाः केन्द्रीय समितिमा को कता ? (नामावलीसहित) « Postpati – News For All
फुट नजिक नेकपाः केन्द्रीय समितिमा को कता ? (नामावलीसहित)
पुस ७, काठमाडौँ । सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई समूहले आज बेग्लाबेग्लै स्थान र समयमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् । दुई समानान्तर बैठकहरु नेकपा विभाजनका लागि आज औपचारिक प्रस्थानविन्दु हुनेछन् ।
नेताहरुका अनुसार आज मंगलबार दुबै पक्षको केन्द्रीय कमिटीले फुटलाई औपचारिकता दिनेछन् । असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद फुटतर्फ उन्मुख भएको हो । नेताहरुका अनुसार कुनै उथलपुथल नभए आज ओली र प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल पक्षले एकअर्कालाई कारबाही गरेर पार्टी विभाजनलाई औपचारिकता दिने सम्भावना छ ।
यस्तो छ नेकपा केन्द्रीय समितिको समीकरण: